Firqada Wahaabiyada iyo Boqortooyada Sucuudiga | Doodwadaag waa Danwadaag.
Maqaalkaan kii ka horeeyay waxaan ku qaadaa-dhigay sida uu fikir-diimeedka wahaabigu uu u yahay qorsho lagu fuliyo danaha Boqortooyada Sucuudiga iyo kuwa xulufada la ah. Si aad u fahamto maqaalkaan, waxaan kugula talinayaa in aad aqriso kii ka horeeyay. Sida aad la wada socotaan, diintu waxay kamid tahay aaladaha dowladuhu adeegsadaan si ay u gaaran danohooda, amaba ay dadka uga gadaan waxyaabaha ay damacsan yihiin in ay fuliyaan. Sida loo adeegsanayo diinta, xilliga la adeegsanayo iyo waliba in la adeegsanayo iyo inkale waa arin u taala kuwa ay talado ka go’do – political elite النخبة السياسية. Markii ay bilowdeen kacaanadii carbeed waxaa durbadiiba hor istaagay wadamo ay kamid yihiin Sucuudigu oo ay madaxdoodu ka baqayeen in xukunka laga tuuro. Si aaney taa u dhicin, waxay iska soo hormariyeen wadaado leh mudaaharaadku waaba xaaraan, demoqoraadiyadu waa dhaqan gaalo iyo ma banaana in madaxda laga hor yimaado. Wadaadada sidaa dhahaya laftoodu waxay taageersan yihiin in la rido madax kale oo uu kamid ahaa Muammar al-Gaddafi maadaama ay danta Boqortooyadu sidaa ku jirto. La jiifiyaana banaan, la joojiyaana banaan!
Muddo markii ay qalalaasihi siyaasadeed socdeen ayaa waxaa xukunka dalka Masar ku soo baxay Ururka Ikhwanul-Muslmiinka oo dalkaa ku lahaa shacbiyad badan, dowladda Sucuudiguna aad u necebtahay. Dowladda Sucuudigu waxay dhaqso ku abaabushay Wahaabiyada Masar oo aan tira badnayn, balse Riyaal farqaha uga buuxo. Waxay durbadiiba ku dhawaaqeen urur la magac baxay Xisbiga Al-Nuur oo ujeedkiisu ahaa in Ikhwanul-Muslmiinka uu daaqada kala boxo; asagoo kaashanaya Quraan iyo axaadiis fasirkoodu la siyaasadeeyay. Waxay bilaabeen in ay dhankooda ka mucaaradaan Ikhwanul-Muslmiinka, lana soo saftaan ciidamada Masar iyo Abdel Fattah al-Sisi oo ayaguna Khaliijka taageero ka helayay. Waxa ku khasbay Wahaabiyada in ay la saftaan ciidanka, kana soo horjeestaan Ikhwaanka waa dowladda Sucuudiga oo ayadu khatar u arkaysa ururka Ikhwaanka. Dowladda Sucuudigu waxay u aragtaa Wahaabiyada in ay yihiin garab u adeega aydiyoolajiyadeeda, sidaa ayayna lacagaha ku siisaa. Matalan, waxaan arki jirnay wadaado Soomaaliyeed oo leh Cabdullahi Yusuf waa gaal, dowladda uu hugaamiyana waa riddo waana in lala diriraa, halka ay dowladda Sucuudiga u yaqaanaan dowaladdii towxiidka دولة التوحيد! Waa maxay farqigu?
Dagaalka Suuriya ayaa asaguna ah mid wax badan oo qarsoonaa banaanka soo dhigay. Dowladda Sucuudiga iyo Maraykanku waxay rabeen in Bashar al-Assad la rido, balse aan Ikhwanul-Muslmiinku beddelin. Qorshuhu wuxuu ahaa in dagaalku iska daba dheeraado, haddii aan la heli karin dowlad Sunni calmaani ah. Wahaabiyo waxay bilaabeen (ayagoo fulinaya ajandaha Boqortooyada) in ay makarafoonada qaataan, kuna baaqaan Jihaad ka dhaca Shaam. Halkaa waxaa ka bilowday qul-qulka dhalinyaro jihaand-doon ah oo danaynaya in ay gaalo la diriraan, halkaana ka dhisan dowlad Ilaahay raali ka yahay. Wuxuu dagaalku socdaba, waxaa soo baxday in waxyaaba badani isku xir xiran yihiin, kuwii jihaadka loo dirayna ay khatar hor leh ku keeni karaan Boqortooyada iyo xulufadeeda. Awalba waxa loo diray waxay ahayd oo kali ah in ay dagaalka sii daba dheereeyaan ee ma ehayn in ay dowlada Islaami ah dhisaan. Hadda kuwii halkaa u jihaad doontay (ayagoo ka amba qaadaya fatwooyinkii Wahaabiyada) oo dhani waa argagixiso, wadaadadii shalay jihaadka u diray ayaana manta u yaqaana Khawaarij!
Intaa waxaa dheer, waxaa loo samaystay isbahaysi cusub oo loogu magac daray Isbahaysiga-Islaamiga ah, si looga taqalluso dhamaantood. Ujeedku wuxuu ahaa in la isticmaalo in mudda ah ee ma ahayn in la dhiso dowladdii Eebbe, sida maangaabta loogu sheekeeyay. Sida aad ka warqabtaan waxaa shalay ka dhacay shir caalami ah Magaalada Riyaad ee dalka Sucuudiga. Madaxwaynaha Maraykanka Mr. Trump wuxuu ku baaqay in argagixisada laga saaro Masaajida iyo meel walba. Dowladda Sucuudigu wax badan bay beddeli doontaa mustaqbalka dhow ayadoo kaashaneysa Riyalkeeda iyo wadaad beenaale ah. Awalba labadaa ayay wax badan ku kharibtay. Wahaabiyadu waa urur-diimeed gacanta ugu jira Boqortooyada Sucuudiga, waxayna u adeegsataa ciddii ay doonto, habki ay doonto iyo waliba waqtiga ay doonto. Waxaan goob joog u ahaa wadaad yiri: Dowladda Sucuudiga munaafaq iyo gaal kaliya ayaa wax ka sheega! Waxa hadlay asaga ma aha ee waa Riyaalka jeebabka looga buuxiyay.
W/Q: Maxamed Caddaani